Tattoo nke uroboro, mgbanwe ebighi ebi | Igbu egbugbu
Tattoo nke uroboro, mgbanwe ebighi ebi
Ma eleghị anya, egbugbu nke uroboro ya amaghi gi, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka onyinyo ya, dragọn ahụ ma ọ bụ agwọ na-eri ọdụ nke ya, n'ezie ọ ga-ada ụda karịa gị.
Mgbe ah anyị ga-ahụ ihe ndị egbugbu site uroboro, akara ngosi oge ochie nke mmeghari ohuru zuru oke maka ndị kwenyere na ndụ bụ usoro mgbanwe.
1 Ihe ngosi anwansi nke imeghari
2 Otu ihe nnọchianya maka ụwa dum
Ihe ngosi anwansi nke imeghari
Ogbugbu Uroboro dabeere na ihe oyiyi nwere mgbọrọgwụ n'Ijipt oge ochie (Edere ọdịdị mbụ ya n'ili Tutankhamun) ma ọ ruru ụwa ọdịda anyanwụ site na ọdịbendị ndị Greek. Okwu uroboro, n'eziokwu, sitere na Greek, enwere ike ịtụgharị ya dịka nke a, 'rie ọdụ nke aka'.
Ihe akara nke uroboro bara ọgaranya ma nwee ọtụtụ, ọ bụ ezie na, n'ime ala, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-ezo aka n'ụdị ndụ cyclical nke ndụ. Onwere ndi nejikota ya na nmeghari ebighebi nke mmeghari ohuru nke gunyere imumu, ibi ndu, inwu na ibido. N'aka nke ọzọ, a na-ejikọ ọdụ nke agwọ na akara ngosi nwoke, ebe ọnụ na-anọchi akpanwa na ihe atụ maka ịmụ nwa.
Otu ihe nnọchianya maka ụwa dum
Tattoodị uroboro nwere ihe yiri ya na ọdịbendị ndị ọzọ gburugburu ụwa. Maka ndị Grik, dịka ọmụmaatụ, ọ jikọtara ya na echiche nke mmeghari ohuru, ebe ọ bụ na akara a metụtara ihe ndị sitere n'okike., nke ruru ogo iji kwụsị ma bido ịmalite (dịka oke ifufe, dịka ọmụmaatụ).
N'aka nke ọzọ, Ọ bụkwa ihe nnọchianya dị oke mkpa maka ndị na-eme nchọpụta, ebe ọ bụ na uroboro abụghị nanị na-anọchi anya ihe niile dị n'otu, ọ bụkwa ihe nnọchianya nke duality., n'ụzọ yiri ying na yang, nke ọ na-ekerịta myiri doro anya.
Anyi nwere olile anya na ihe edemede a nke putara udiri uroboro siri ya uto. Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị nwere egbu egbu dị ka nke a na nkwupụta!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Echiche antgha » Tattoo nke uroboro, mgbanwe ebighi ebi